လှိုင်သာယာရပ်ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူး မှ ထောက် ပံ့ကြေး ပေးမှု နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မြို့နယ်ထွေအုပ် ထံကို ဒဲ့ပြော….(ရုပ်သံ) – Let Pan Daily
လှိုင်သာယာရပ်ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူး မှ ထောက် ပံ့ကြေး ပေးမှု နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မြို့နယ်ထွေအုပ် ထံကို ဒဲ့ပြော….(ရုပ်သံ)
‌ဈေးသည် ဈေးပြန်ရောင်း လို့ မပေးဘူး၊ ဆိုက်ကားသမား ဆိုက်ကားပြန်နင်းလို့ မပေးဘူး။ ဆိုင်ကယ်သမား ကယ်ရီပြန်ဆွဲနေလို့ မပေးဘူး။ စက်ရုံသမား စက်ရုံပြန်ဆင်းနေလို့ မပေးဘူး။ အိမ်ပိုင်မို့ မပေးဘူး။ သူတောင်း စားခွက်ရှိလို့ မပေးဘူး။ တိတိကျကျ စာထုတ်ပေးပါ” လှိုင်သာယာမြို့ ရပ်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတစ်ဦး နိုင်ငံတော်မှ COVID-19 ကာလ၌ နိုင်ငံသားများကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန် စီစဉ် ထားသည်။
ကဲ့သို့ နိုင်ငံ တော်မှ ထောက်ပံ့မည့် အစီစဉ်ကို မြို့နယ်ထွေအုပ်မှ ရပ်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ ညွှန်ကြား ထားခဲ့ပါတယ်။ အလားတူ သင်္ကြန်ကာလ ၌ နိုင်ငံတော်မှ ဆန်အပါအဝင် ရိက္ခာအချို့ကို ထောက်ပံ့မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုသို့ ထောက်ပံ့ရာ၌ ရပ်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူး များသည် လက်သင့်ရာပေးဝေမှု ပြုလုပ်မှုအချို့ရှိခဲ့ကြောင်း ဝေဖန်သံ များလည်း ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်၌ နိုင်ငံတော်မှ ငွေကြေးထောက်ပံ့မည့် ကိစ္စရပ်တွင် ရပ်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ကြုံတွေ့နေရ သည့် အခက်အခဲအချို့ ကို People Media မှ ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။ အဆိုပါ ရုပ်သံသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ ကြီး လှိုင်သာယာမြို့နယ် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများမှ မြို့နယ်ထွေအုပ်ထံ ၎င်းတို့၏ မြေပြင် အခြေအနေများ ကို တင်ပြနေသည့် ရုပ်သံဖြစ်ပါတယ်။